नेपाली कांग्रेस पाल्पा अधिवेशन भदाै २१ देखी, कसरी चुनिन्छन् प्रतिनिधीहरू? (प्रक्रियादेखी संख्यासम्म) - Sero Fero News
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत शुक्रबारदेखि वडा अधिवेशन सुरु भएको छ । महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार १८ भदौमा देशभरका सबै वडामा अधिवेशन गर्ने भनिए पनि आज करिव ४५ जिल्लामा मात्र अधिवेशन हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
५६ जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवरण सार्वजनिक गरिए पनि अझै २१ जिल्लाको सदस्यता टुंगो लाग्न सकेको छैन । त्यसैले सबै जिल्लामा वडा अधिवेशन शुक्रबारै सुरु हुनेछैन । कांग्रेसले बाँकी जिल्लाका वडाहरुमा २६ भदौ अघि अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्ने जनाएको छ । किनभने २७ भदौमा गाउँ÷नगर अधिवेशन हुनेछ ।
पाल्पा जिल्लाकाे अधिवेशन भदाै २१ गतेदेखी सुरू गर्न लागिएकाे नेपाली कांग्रेस पाल्पाका सभापती वीर बहादुर रानाले बताए । उनले भदाै १९ गते जिल्ला कार्य समितिकाे बैठक राखेर निर्वाचनकाे अन्तिम तयारी गर्न लागिएकाे रानाले बताए । कांग्रेसले भदौ १८ गते अधिवेशन गर्न नसकेका वडाहरूमा अर्को मिति तोक्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लामा खटिएका निर्वाचन अधिकृतलाई दिएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले बनाएको निर्वाचन निर्देशिकाले भदौ १८ गते कारणवश अधिवेशन हुन नसकेका वडाहरूमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिसँग परामर्श गरी सम्बन्धित जिल्लाका निर्वाचन अधिकृतले नै अर्को मिति तोक्ने र अधिवेशन गराउन सक्ने अधिकार दिएको हो ।
वडा अधिवेशनमा क्रियाशील सदस्य मतदाता रहने कांग्रेस विधानको व्यवस्था छ । वडा अधिवेशनबाट वडा कमिटी चयनका हुनुका साथै क्षेत्रीय प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । सबैभन्दा बढी मत ल्याउने निर्वाचित हुनेछन् । कांग्रेसको संशोधित विधान अनुसार क्षेत्रीय प्रतिनिधिले पालिकाको नेतृत्व चयन गर्नेछन् भने निर्वाचन क्षेत्र ९प्रदेश र प्रतिनिधिसभा० कमिटी चयनका लागि मतदाता हुन् ।
पाल्पा जिल्लामा निर्वाचन अधिकृतका रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी खटीएकाे नेपाली कांग्रेस पाल्पाले जनाएकाे छ । उनी शुक्रबार पाल्पा अाउँदैछन् । त्रिपाठी जिल्लामा खटिएसँगै पाल्पामा नेपाली कांग्रेसकाे अधिवेशनकाे चहलपहल बढेकाे छ । पाल्पामा कुल नाै हजार १ सय ५८ जना क्रियाशिल सदस्यबाट झण्डै १ हजार ४ सय सय ४७ जना प्रतिनिधी चयन हुनेछन् ।
याे पनि पढ्नुहाेस्…पाल्पा कांग्रेसमा जिल्ला सभापतिका लागि आकाङ्क्षी को को ?
पाल्पा कांग्रेसकाे अधिवेशन भदाै २१ बाट सुरू हुनेछ । वडा अधिवेशनबाट क्षेत्र नं. १ मा ६ सय ६७ जना र क्षेत्र नं. २ मा ७ सय ८० जना जना प्रतिनिधी चयन हुनेछन् । यिनीहरू मध्येबाटै क्षेत्रीय र जिल्ला कार्यसमिति चयन हुनेछ । क्षेत्रमा ५१ जना महाधिवेशन प्रतिनिधी, ६४ जना प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधी र ५५ जना जिल्ला कार्यसमितिमा चयन हुनेछन् ।
वडागत रूपमा चयन हुने प्रतिनिधी संख्या विववरण…
पाल्पाका प्रतिनिधीहरू मध्येबाट ६६ जना क्षेत्रीय कार्य समिति र १ सय २४ जना प्रदेश कार्यसमितिमा जानेछन् । केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि मतदाता रहने महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयन पनि क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाटै हुने भएकाले कांग्रेसमा वडा अधिवेशनलाई निकै महत्वका साथ हेरिन्छ । विधान अनुसार २०७६ फागुनमै हुनुपर्ने कांग्रेसको महाधिवेशन पाँच वर्ष ६ महिनामा सुरु हुन लागेको हो । कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिर ९ देखि १३ सम्म काठमाडौंमा हुनेछ ।
कांग्रेसको नयाँ कार्यतालिकाअनुसार गाउँ/नगरपालिका अधिवेशन भदौ २७ गते, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन असोज १ गते, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय तथा एक मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज ५ गते, एकभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज १० गते र प्रदेश अधिवेशन कात्तिक १०, ११ र १२ गते हुनेछ । त्यस्तै, आगामी मंसिर ९–१३ मा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका छ ।
जबर्जस्ती करणी आरोपमा एक जना युवक पक्राउ
पाल्पामा थप २९ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि
आइतवार, असोज ३१, २०७८